Edolobheni Izhevsk, inala izindawo uphumule nabangani noma unkosikazi. Kafushane, emzini Izhevsk ukuzijabulisa yakho. Izhevsk ithilomu njalo uyajabula ukubungaza izivakashi zabo ezihlukahlukene cuisine, futhi izinhlangano zamasiko, zokubukela amabhayisikobho cishe zonke ngesonto ukulungele ukuthatha izivakashi zabo. Hhayi ukuthi ngifisa ukukhangisa wakubo, kodwa uma eqhathaniswa kwamanye amadolobha amakhulu Russian, lapha unomphela, ungathola okuthile okuthakazelisayo.
By the way, cafe e Izhevsk Ngivame ukucabanga ngezinto ezenzeka ngokusebenzisa portal. Kuhle, ngoba akukho isidingo ngokwabo bavakashela bonke zokudlela ukuba benze isinqumo. Yiqiniso, enginakho izikole eziningana intandokazi, kodwa ngaso sonke isikhathi ezithakazelisayo ukuthola into engaziwa.
Uma ziyazithanda izici zezombangazwe zokuphila emzini, ngeke asondele izinsiza izindaba, angikuthandi umkhumbi ngokwawo ukwaziswa okunjalo. Ngenxa yalokho kokusebenza kanzima imini yonke, angifuni ukuchitha zokugcina bamandla ayo ukuthola izindawo ezifanele nesokuphumula komagazini. Lapho isandla iwumthombo lomculo, ngiyabona ukuthi lokho kule mpelasonto mina ngibe ezithakazelisayo futhi kumnandi. Futhi inqubo yokukhetha okuhle kakhulu kungaba nje Okusemthethweni poster Izhevsk.
Ngo Izhevsk ngokwanele izindawo uphumule nomndeni noma abangani. Izhevsk zokudlela bekulungele ukubungaza izivakashi zakho ezihlukahlukene cuisine nokuzijabulisa izikhungo, yeshashalazi bangase bahlale ulindele izivakashi zabo. Kafushane, emzini Izhevsk akuvumeli nesithukuthezi. Hhayi ukuthi ngifisa ukukhangisa idolobha intandokazi, kodwa uma eqhathaniswa kwamanye amadolobha amakhulu esikhulu isiRashiya, ungathola njalo okuthile okuthakazelisayo.
Ngezinye izikhathi isinqumo ezihlukahlukene kangangokuba kuthatha isikhathi eside ukuba akhethe phakathi zemicimbi ezikhanga kakhulu. Indlela ukuhlela iholidi in Izhevsk? Angikwazi ukuphendula ngawe lo mbuzo, kodwa mina ungacacisa ukudweba ukhululekile kakhulu imisebenzi, amakhonsathi kanye nezinye imikhosi ebalulekile Izhevsk kuphi futhi kanjani. Umthombo Imininingwane - esizeni Izhevsk, lapho wonke umuntu angakwazi ukuthola ukuthi unesithakazelo. Ngase kakhulu bakhangwa-trailer e Izhevsk, ngoba ngizama ukungahlali ngicabanga ukudlula ifilimu iqala. Uma uthanda umndeni ukuzijabulisa e Izhevsk, ngitusa uvakashele zoo. Kuyaziwa ukuthi owaziwayo Izhevsk Zoo - omunye onhlobonhlobo ku Russian Federation.
Ngokushesha ezongivakashela kusuka eMoscow kuya fly osekukade abangane, futhi ngifuna bamemele ukusebenza umculi esizithandayo. amakhonsathi elikhulu e Izhevsk kukhona njalo, udinga kuphela ukubuka isheduli imicimbi, ngakho miss ukufika umculi odumile.
Phakathi kwezinye izinto, cafe e Izhevsk Ngivame ukucabanga ngezinto ezenzeka ngokusebenzisa portal. Kuyinto elula kakhulu, ngoba akukho isidingo ngokwabo bavakashela bonke amathilomu ukuba enze ukukhetha. Yiqiniso, enginakho ambalwa izikole ozithandayo, kodwa ngangihlale uthanda ukufunda okuthile angajwayelekile.
Uma ziyazithanda izici zezombangazwe nezenhlalo ukuphila edolobheni, ngeke asondele amasayithi izindaba, angikuthandi nasemthwalweni ngokwabo ulwazi olunje. Ngaleso sikhathi, lapho kukhona indawo lomculo, ngiyabona ukuthi lokho kule mpelasonto ngingazithanda. A inqubo yokukhetha samuntu kunenzuzo nje Okusemthethweni. Ngenxa yalokho, lo eziyinkimbinkimbi lweviki yinto yokugcina Ngingathanda ukuchitha amabutho zazo ziyofuna yokusebenzisa izinkundla ezifanelekayo ukuze iholidi in nedlanzana lomagazini.
Shuvalov Isigodlo: amahora zokusebenzela, izithombe kanye nohlu nemibukiso
Cauterize ubuhlungu uma ukuguguleka wesibeletho? Injani inqubo, imiphumela yayo